ဧရာဝတီ| July 6, 2012 | Hits:1
| | ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်သည့် နေ့ဖြစ်သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ကိုအောင်အောင် July 6, 2012 - 8:44 pm	အာရှ နိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ် ရင် မဆိုင်ရဲ ကြဘူး။ ဂျပန် ဟာ ဥပမာကောင်းတခုဘဲ။ သူရက်ရက် စက်စက် လုပ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်တော့ မှ ၀န်မခံဘဲ နဲ. ငြင်းကွယ်ဖို. အမြဲကြိုးစားတယ်။ အဲတော့ ဂျပန်ဟာ သမိုင်းအရိပ်ဆိုးအောက်က မထွက်နိုင်ဘူး။ ဂျာမနီ ဆိုရင် သူ.အမှားကို လက်ခံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရှေ.ဆက်သွားတယ်။ အတိတ်ဆိုးအောက် က ရုန်းထွက်သွားတယ်။
Reply	min mg mg July 8, 2012 - 12:33 am	သမိုင်းကို ပြည်သူကဖန်တီးတယ်လို့ဆိုတယ် သမိုင်းမှာအပြောင်းအလဲကို လိုခြင်သူကပြည်သူတွေဖြစ်ပြီး အပြောင်း အလဲကို ဆန့်ကျင်သူက အုပ်စိုးသူ အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်တွေ ဒီထက်ထူးသူတွေက စစ်အာဏာရှင်တွေ ပါ။ သမိုင်းလို့ပြောရင် စနစ်ဆိုတာကို မေ့ထားလို့မရဘူးထင်တယ် ။ စနစ်ကို သဘောပေါက်မှ အဖြစ်ကိုနားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကိုသက်သက်ပြောနေရင် စနစ်ကိုမေ့ထားရင် အဖြစ်ဆိုတာ အပေါ်ယံပြောင်လဲလို့ရပေမဲ့ စနစ် ကတော့ အမြစ်ကလှန်မှရတာပါ။ ဒါလေးတခုစဉ်းစားကြည့်ပါ -